Umlawuli weqela lesithathu uwisa amarhe malunga neSiri Remote entsha | Ndisuka mac
Umlawuli weqela lesithathu utshabalalisa amarhe malunga neSiri Remote entsha
Kule veki kwaye ngakumbi ngolwe-Lwesibini odlulileyo kuye kwasungulwa amarhe malunga nokufika okunokwenzeka kolawulo olutsha olukude lwe-Apple TV. Kwakumalunga Ukuhlengahlengiswa kwakhona kwemodeli yangoku ngokweehemuhemu, kodwa okokugqibela kubonakala ngathi oku kuyakuba yinto engento kwaye idatha efunyenwe kuhlobo lwe-beta I-tvOS yathetha ngoyilo lwe Izinto ze-Elektroniki zendalo yonke ezikude.
Ke ezi ndaba okanye amarhe ngokomgaqo anokungavunyelwa ngokupheleleyo ngoku. Ihlazo lokwenyani kuba nangona liyinyani ukuba ulawulo lwe-Apple ekude alunakuba sisiseko seengxaki ze-Apple TV, Ukuyila kwakhona kuyo kunokuthetha ukuhlaziywa kwebhokisi ephezulu ngokwayo.
Inyani yile yokuba iApple iye yasityeshela isixhobo ngokubhekisele kuhlaziyo kwaye le yinto esiyaziyo sonke. Ngoku ukufika kweenkonzo kunye nokusetyenziswa kweApple TV + yeethelevishini kubonisa ukuba I-Apple ayinanjongo yokuyihlaziya Kwaye naliphi na amarhe malunga notshintsho kwisixhobo okanye i-remote control ngokwayo iphakamisa ulindelo oluninzi.
Utshintsho olunokusetyenziswa kwisixhobo ngokubanzi lungaphakathi kunangaphandle kwaye lunokongeza ukhetho lweaudiyo yendawo okanye izinto ezinje. Into ebonakalayo kukuba iApple inezinye izinto eziphambili kwaye akukho nto ibonisa ukuba kulo nyaka siza kuba notshintsho kwisixhobo. Iyasebenza, iyasebenza, ke asizukufuna ukuba utshintsho lwenziwe ngoku. Kodwa kuyinyani ukuba namhlanje akucebisi kakhulu ukuba uthenge esi sixhobo sincinci ekhaya kuba kukho ezinye iindlela ezinomdla ngakumbi kwintengiso ngexabiso eliphantsi. Ngubani na onayo i-Apple TV ukuze ayonwabele ngokupheleleyo, lowo akalindi ngcono okanye akayithengi ngokuthe ngqo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Umlawuli weqela lesithathu utshabalalisa amarhe malunga neSiri Remote entsha
Isikhangeli seOpera ngoku sixhasa i-M1 processor
IMac Pro njengoyilo oluphefumlelweyo lwe-iPhone